Idizayini Yemidwebo Yechibi Lokubhukuda
Kungani wenze imidwebo ye-swimming pool
Imithetho yokuklama i-swimming pool iyadingeka kakhulu ekwakhiweni kwamachibi okubhukuda, futhi kungashiwo ukuthi ibalulekile.
Ngokuvamile, abaklami bezakhiwo, osonkontileka abavamile noma abakhi bamachibi okubhukuda bahlinzeka kuphela ngamapulani amabi kumakhasimende abo. Ngakho-ke, ukwakhiwa kwechibi lokubhukuda kungenziwa kuphela ngusonkontileka jikelele. Ngale ndlela, awukwazi ukukhetha okuningi kakhulu mayelana nezindlela zokwakha, izinto zokwakha kanye nemishini. Kufanele ukhokhele isabelomali sakho sokwakhiwa kwechibi ngentengo yosonkontileka.
Nokho, ku-GREATPOOL ungakwazi ukulawula isabelomali sakho sephrojekthi ye-pool ngokusebenzisa imidwebo esikwenzela yona. Lokhu kudinga ukuthi uchithe isikhathi esithile ukhuluma, kodwa singakuqinisekisa ukuthi kuyafaneleka.
Qhubeka ufunda futhi sizokuchazela ukuthi ubamba iqhaza kanjani nokuthi yini ongayithola kukho.
Okokuqala, sizokunikeza isethi ephelele yemidwebo yokuqaliswa kwephrojekthi. Ukhathazekile ngokungaqondi imidwebo yethu. Idizayini yabo kulula ukuyiqonda, ngisho nabaqalayo abakha amachibi okubhukuda.
Okwesibili, siphinde sinikeze uhlu oluphelele lwemishini yokuhlunga ezofakwa kumachibi okubhukuda kanye namakamelo okupompa.
Okwesithathu, lonke ukwakhiwa nokufaka ukwesekwa kwezobuchwepheshe. Wesaba ukuntuleka kwamakhono okwakha i-swimming pool. Uma kunesidingo, sizoba nawe ngesikhathi somsebenzi ukuze sikunikeze ukwesekwa kwezobuchwepheshe.
Ngamafuphi, uma usubambe iqhaza kuphrojekthi yokuklama ye-GREATPOOL, uzokwazi ukuqonda ukuthi i-swimming pool yakho isebenza kanjani; umdwebo we-hydraulic ubonisa ngokucacile indawo yamapayipi, futhi wonke ama-valve kanye nemishini esendlini yokumpompa kuyashiwo.
Imidwebo ye-swimming pool ihlanganisa
Isimo sephrojekthi yakho: Sizokukhombisa indawo ngqo yechibi lokubhukuda ngokusekelwe kumephu yendawo.
Umklamo we-swimming pool
Ngenxa yalo mdwebo, uzokwazi ukwenza ubunjiniyela besakhiwo ngendlela efanele. Khomba wonke amanani akaliwe ukuze ugweme amaphutha. Lesi sigaba sibonisa ngokucacile ukujula okuhlukene kwamanzi kanye nezitebhisi eziholela echibini lokubhukuda.
Idizayini yemikhombe echichimayo kanye nama-gutters imakwe; ngokuvamile, sizonamathisela imininingwane enemininingwane ukuze abasebenzi baqonde kangcono.
Okuhlangenwe nakho kwethu kubonisa ukuthi ukusetshenziswa kombala kwenza umdwebo ufundeke; lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi kumachibi angapheli.
Kafushane, yonke imininingwane yethu ibalulekile ekugcwalisekeni kwemidwebo yakho yedamu lokubhukuda.
Kusukela echibini kuya ekamelweni lemishini
Ohlelweni olujwayelekile lwechibi lokubhukuda, sidwebe izakhiwo zamapayipi ezihlukene ezixhuma izisekeli zechibi kanye negumbi lempahla .
Ukuze kube lula ukuqonda, sisebenzise imibala ehlukene futhi samaka ngokunembile indawo yesisekeli ngasinye; abukho ubungozi bephutha.
Ukuze kube lula umsebenzi wabasebenza ngamapayipi, sahlela ngokunengqondo wonke amapayipi aphuma ku-swimming pool.
Ekugcineni, lesi sakhiwo samapayipi singakwazisa indawo yepayipi ngalinye; lokhu kungase kube usizo ngolunye usuku.
Igumbi lemishini kwesinye isikhathi alinakwa ochwepheshe be-pool ngoba alibonakali; Nokho, lokhu kuwumongo wokufaka kwakho. Ngenxa yalokho, amanzi echibi lakho azohlanzeka futhi aphathwe kahle. Kumachibi ama-infinity, amadivaysi okuphepha kufanele afakwe.
Umdwebo wokufaka oklanyelwe ngokusho kobukhulu obunembile bekamelo ubonisa wonke amapayipi, ama-valve adingekayo kanye nemishini ekamelweni lokupompa. Ama-valve adingekayo anikezwa futhi izindawo zawo ziphawulwe ngokucacile. I-plumber idinga ukulandela uhlelo kuphela.
Njengomnikazi wedamu lokubhukuda, lolu hlelo lukuvumela ukuthi uphathe kahle uhlelo lokuhlunga.
Izinyathelo zokuzuza izinhlelo zedamu lokubhukuda
Xoxani kanye, bese nithumela imibhalo, njengamapulani esakhiwo, izithombe zemvelo, nokubukwa kwedamu lokubhukuda lesikhathi esizayo.
2.Ukufezekiswa kwecebo lomqondo
Sizocabangela izifiso namaphupho akho ukuze sifeze iqiniso elisebenzayo elifanele umhlaba wakho nendawo yawo. Lolu hlelo lomqondo luyisiqalo sayo yonke imidwebo, futhi sizochitha sonke isikhathi sikuxoxa nawe.
Uzothola, ngefomethi ye-PDF yedijithali, yonke imidwebo ye-swimmimg pool ukuze ukwazi ukwakha noma ukwakhiwa kwechibi lakho ngokuthula kwengqondo okuphelele. Sengeza nenani lezinto zokuhlunga (izingxenye ezizovalwa, okokusebenza, ...)
4.Ngemva kwemidwebo yedamu lokubhukuda
Uma ufisa, sizohlinzeka ngezindlela ezahlukene zokusekela. Ungafunda mayelana nalezi zinsizakalo lapha.
I-FAQ mayelana nemidwebo ye-swimming pool
Usebenza kuliphi izwe?
Sisebenza ku-inthanethi futhi asidingi ukuhamba ukuze sikusize. Ngakho-ke, sisebenza emhlabeni wonke.
Ngizokwazi yini ukucela izingcaphuno ngemidwebo yakho?
Kunjalo ! Umgomo wethu uwukuba ulawule iphrojekthi yakho yedamu lokubhukuda. Ngemidwebo yethu kanye nenani lezinto zokusebenza, noma yimuphi umenzi kanye ne-plumber angakunika isilinganiso. Yiqiniso, sikweluleka ukuthi ucele izingcaphuno ezivela kubangcweti abaningana ukuze ukwazi ukuqhathanisa. Ungakwazi futhi ukuzithengela wena izisetshenziswa.
Ngithole ipulani lomdwebi wezakhiwo; yini enye ongangilethela yona?
Amapulani ahlinzekwe ngumdwebi ngokuvamile amapulani amatshe amabi; ngezinye izikhathi aqukethe imininingwane enemininingwane eqondene ngqo nechibi elichichimayo, kodwa kuncane kakhulu. Ngaphezu kwalokho, ukufakwa kwamapayipi, ukufakwa kanye nezihlungi akubonisiwe. Sithumelele uhlelo lwakho futhi sizokutshela ukuthi singakusiza kanjani.
Isevisi ye-Swimming Pool, Isixazululo sePublic Swimming Pool, Isixazululo se-Outdoor Swimming Pool, Inkampani ye-Swimming Pool, Iphrojekthi Yephuli Yokubhukuda, I-Infinity Edge Swimming Pool,